Hampiavaka azy io ireo “teste de combat” ho an’ireo vehivavy lehibe ary harahana “combat” ho an’ireo nihofana ho mpampianatra ao amin’ny TCDCL. Izao no natao dia hijerevana ireo sangany amin’ny “combat libre TCDCL” eto Madagasikara ary koa hiomanana amin’ny fifaninanam-pirenena amin’ny taona 2020, hoy ny mpikarakara. Tsara manidry fa ny TCDCL na Tek Chuan Do Combat Libre dia mijoro ara-panjakana izay efa manomboka miparitaka manerana Nosy. Ankoatra ny “combat libre” dia misy ny fampianarana “self-defense” na fiarovan-tena ho an’ny vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe . ny foibe TCDCL dia ao Dojo RM1 Analakely isaky ny alahady maraina amin’ny 07ora sy amin’ny 10ora ary amin’ny 02ora ny fanazaran-tena , ny grand maitre Tahina andrianaivo no nitondra sy namorona ny TCDCL eto Madagasikara.